Epistily nosoratan'i Joda - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Epistilin'i Joda)
Ny Epistily nosoratan'i Joda, Epistola nosoratan'i Joda na Taratasy nosoratan'i Joda dia boky ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Testamenta Vaovao izay isan'ireo atao hoe epistily. Isan'ireo Aatao hoe Epistily katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho an'ny fiangonana sy ny olona rehetra. Tokony ho teo anelanelan'ny taona 80 sy 100 no nanoratana azy.
Ity epistily ity dia taratasy nosoratana ho an'ny Kristiana sasany nihamalemy finoana noho ny fampianaran'ireo Kristiana manao ny fivavahanan'ny mpanompo sampy ratsy miharo filibana ara-nofo sy milaza tena ho afaka amin'ny fanajana ny lalàn'ny fitondran-tena. Misintona ny sain'ny Kristiana ny amin'ny loza ara-panahy misy azy sady mamporisika azy ireo hitoetra ho mahatoky i Joda.
Επιστολή Ιούδα / Epistolê Iouda no anaran'io epistily io amin'ny teny grika fa Epistula Iudae kosa amin'ny teny latina.
Heverina ho i Joda Tadeo ity Joda mpanoratra epistily ity, nefa tsy milaza ny tenany ho apostoly izy ao amin'ny andininy voalohany ao amin'io epistily io, ka miresaka ny fampianaran'ireo apostoly amin'ny fampiasana mpisolotena fahatelo ao amin'ny andininy faha-17.
Ny mpanoratra ity epistily ity dia miantso ny tenany hoe "Joda, mpanompon'i Jesosy Kristy sy rahalahin'i Jakoba" (Joda 1.1). Maro no mihevitra fa ity Jakoba ity dia ilay nanoratra epistily ao amin'ny Testamenta Vaovao ho "rahalahin'ny Tompo".
Ny fotoana heverin'ny mpikaroka fa mety nanoratana iny Epistilin'i Joda dia miova eo anelanelan'ny taona 54 sy taona 180 eo. I Jacques Schlosser dia mieritreritra fa teo anelanelan'ny taona 80 sy 100 izany.
Na i Jakoba na i Joda anefa dia tsy nirehareha ny amin'izany rohim-pihavanana izany fa nionona amin'ny fiantsoana azy ireo ho "mpanompon'i Jesosy Kristy" (Joda 1.1).
Mampitandrina ny Kristiana amin'ireo izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitra ho filibana amin'ny alalan'ny fandavana an'i Jesosy Kristy ny mpanoratra (Joda 3-4). Manome ohatra fitsarana ao amin'ny tantaran'ny famonjena ny mpanoratra, dia ny amin'i Sodoma sy i Gomora, sy ny fikomian'ny Kere. (Joda 5-16). Ny sasany amin'ireo ohatra ireo dia tsy hita ao amin'ny lahatsoratra kanonikan'ny Baiboly fa ao amin'ny literatiora apokaliptika jiosy izay fantatr'ireo olona nanoratana ny taratasy.
Mamporisika ny fanehoam-pitiavana amin'ireo izay nania, amin'ny filazany hoe "Nefa ianareo, ry sakaiza" sy ny hoe "mahaiza mamindra fo" rehefa avy niresaka ny amin'ny fitsarana izay mampatahotra tamin'ny andro taloha sy amin'ny andro hoavy.
↑ Jacques Schlosser, "L'Épitre de Jude", dans Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Testament, Labor et Fides, 2008, 4e éd. (1re éd. 2001), p. 474-475
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_nosoratan%27i_Joda&oldid=973070"
Voaova farany tamin'ny 19 Aogositra 2019 amin'ny 10:38 ity pejy ity.